Nzọụkwụ 3 na Usoro Mgbasa Ozi Di Ike maka ndị na-ebipụta akwụkwọ na-akwọ aka na ego | Martech Zone
Ebe ndị ahịa na-arịwanye elu n'ị consumptionụ akụkọ banyere ọnlaịnụ ma nwee ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ dị, ndị mbipụta ebipụta ahụla ego ha na-enweta. Na maka ọtụtụ, ọ bụ ihe siri ike imeghari ka a dijitalụ atụmatụ na n'ezie na-arụ ọrụ. Ebe a na-akwụ ụgwọ na-abụkarị ọdachi, na-eme ka ndị debanyere aha gaa n'ọtụtụ ọdịnaya enweghị ego. Ngosiputa mgbasa ozi na ọdịnaya nkwado enyerela aka, mana mmemme a na-ere ere na-arụsi ọrụ ike ma na-efu nnukwu ego, na-eme ka ha ghara iru ọtụtụ puku ndị na-ebipụta akwụkwọ.
Iji netwọọdụ mgbasa ozi iji mejupụta ngwa ahịa nwere ihe ịga nke ọma, mana ndị a na-adabere na kuki maka ndị na-ege ntị, na -emepụta nnukwu mgbochi ụzọ anọ. Nke mbu, kuki emetutaghi ezi. Ha bụ ihe akọwapụtara na ngwaọrụ, yabụ na ha enweghị ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ na ngwaọrụ ejiri (mbadamba nke ọtụtụ ndị ezinaụlọ jiri, dịka ọmụmaatụ), nke pụtara na data ha chịkọtara adịghị mma ma na-ezighi ezi. Kuki enweghị ike ịgbaso ndị ọrụ site na otu ngwaọrụ gaa na nke ọzọ. Ọ bụrụ na onye ọrụ agbanwee na laptọọpụ gaa na ekwentị mkpanaaka, ụzọ kuki ga-efu.
Nke abuo, kuki abughi opt-in. Ruo n'oge na-adịbeghị anya, kuki enyochawo ndị ọrụ kpamkpam na-enweghị nkwenye ha, na ọtụtụ mgbe na-enweghị ihe ọmụma ha, na-ebute nchegbu nzuzo. Nke ato, ndị na - egbochi mgbasa ozi na nchọgharị onwe ha etinyela kibosh na nsuso kuki dịka akụkọ mgbasa ozi banyere otu ụlọ ọrụ si eji - ma ọ bụ na - eji ya eme ihe, dịka ikpe nwere ike ịbụ - data ndị na - ege ntị mebiri ntụkwasị obi, na - eme ka ndị ọrụ na - enyo enyo ma na - enweghị ahụ iru ala. N'ikpeazụ, mmachi na-adịbeghị anya na kuki ndị ọzọ site na ihe nchọgharị ndị ọzọ niile emeela ka kuki netwọk kuki mara nke ọma.
Ka ọ dị ugbu a, ndị na-ebipụta akwụkwọ anwaala iji ohere ha na-eji enweta ihe ha na-elekọta mmadụ ka ha nwee ike ịkpata ego ọzọ. Ọ bụghị naanị na nyiwe ndị a zuru oke nke mgbasa ozi mgbasa ozi, kamakwa ha ewepụla ọdịnaya ndị bipụtara na mgbasa ozi, na-apụ ndị nkwusa ohere ịnweta n'ihu ndị na-ege ha ntị.
Nsonaazụ ikpeazụ: mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ okporo ụzọ ntugharị 100%, nke pụtara na ọ bụrụ na onye ọrụ pịa saịtị saịtị onye nkwusa, onye mbipụta akwụkwọ enweghị ohere ịnweta data onye ọrụ. Ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịmata ndị ọbịa ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịmụ gbasara ọdịmma ha ma jiri ihe ọmụma ahụ mee ihe karịa ihe ha masịrị ha iji mee ka ha nọrọ na nlọghachi.
Yabụ, kedu ihe onye mbipụta akwụkwọ ga-eme? Iji mee mgbanwe maka eziokwu ọhụrụ a, ndị nkwusa ga-ejidesi ike na mmekọrịta ndị na-ege ha ntị wee wulite njikọ siri ike otu na otu karịa ịdabere na ndị ọzọ. Nke a bụ otu esi amalite na usoro ọnụọgụ atọ nke dijitalụ nke na-etinye ndị na-ebipụta akwụkwọ n'isi ma na-eme ka ego ọhụrụ nweta.
Kwụpụ 1: Nwee ndị na - ege gị ntị
Nwee ndị na-ege gị ntị. Kama ịdabere na ndị ọzọ dị ka kuki na ọwa mmekọrịta, kama, gbado anya na iwulite ntọala nke onye debanyere aha gị site na ntinye aka maka akwụkwọ ozi email gị. N'ihi na ndị mmadụ adịkebeghị ekekọrịta adreesị ozi-e, ọ bụkwa otu ihe ahụ na ngwaọrụ ọ bụla, email bụ ihe nchọpụta pụrụ iche ziri ezi ma dị irè karịa kuki. N'adịghị ka ọwa ntanetị, ị nwere ike isoro ndị ọrụ na-emekọrịta ihe karịrị email, na-egbutu onye etiti.
Site na itinye aka a, ị nwere ike ịmalite iwulite nkọwa zuru oke nke ihe ndị ọrụ chọrọ site na ịchụso omume ha na ịmụ banyere ọdịmma ha ọbụlagodi ngwaọrụ na ọwa. Na, n'ihi na email abanyela kpamkpam, ndị ọrụ enyela ikike ka ị mụta omume ha, yabụ enwere ntụkwasị obi dị elu karịa.
Kwụpụ 2: Leverage nwere Channels karịrị Channels nke atọ
Jiri ọwa dị ka email na ịpị ọkwa ka ị debanye ndị debanyere aha gị karịa ka ịmekọrịta mmekọrịta na ọchụchọ. Ọzọkwa, site na mmekọrịta mmadụ na ọchụchọ, ị na-etinye ndị ọzọ na-achịkwa mmekọrịta ndị na-ege gị ntị. Ndị nche ọnụ ụzọ a abụghị naanị na-achịkwa ego mgbasa ozi kamakwa data onye ọrụ, na-eme ka ọ ghara ikwe gị omume ịmụ banyere mmasị na mmasị ha. Gbanwe ịgbado anya gị na channelụ ị na-achịkwa pụtara na ị na-ejikwa data onye ọrụ.
Nzọụkwụ 3: Zipu Ihe Dị Mkpa, Ahaziri Ntọala
Ugbu a ị matakwara ihe onye debanyere aha ọ bụla chọrọ, ịnwere ike leverage ọwa ndị ahụ zigara ọdịnaya nke onwe gị na nke ọ bụla. Kama ogbe-ma-gbawara, email ma ọ bụ ozi nke dabara na nke na-aga onye ọ bụla debanyere aha, izipu ọdịnaya ahaziri egosiwo na ọ ga-adịkwu irè maka itinye ndị debanyere aha na ịzụlite mmekọrịta ga-adịgide.
n'ihi na Egwuregwu GoGy,, ihe online platformgba Cha Cha n'elu ikpo okwu, na-eziga omenala push hasma Ọkwa abụwo a akụkụ buru ibu nke ha ịga nke ọma aka atụmatụ.
Ikike iziga ozi ziri ezi na ozi kachasị mkpa maka onye ọrụ ọ bụla dị ezigbo mkpa. Ha na-achọ ihe ahaziri iche, na ewu ewu na egwuregwu ahụ dịkwa ezigbo mkpa. Ha choro igwu egwu ihe onye obula na egwu na nke ahu enyerela aka igbanye onu ogugu ndi mmadu.
Tal Hen, GoGy onye nwe ya
Ndị nkwusa dịka GoGy, Assembly, Salem Web Network, Dysplay na Farmers 'Almanac ejirila usoro ọdịnaya a ahaziri.
anapụta ihe karịrị ijeri notma Ọkwa 2 otu ọnwa
Drivegbọala a 25% bulie na okporo ụzọ
Drivegbọala a 40% mmụba na nyocha peeji
Drivegbọala a Mmụba nke 35% na ego ha nwetara.
Ọ bụ ezie na atụmatụ ahụ egosipụtala nke ọma, ị nwere ike ịnọ na-eche:
Kedu onye nwere oge na akụrụngwa iji zipu ozi-e ahaziri iche ma kwalite ọkwa maka ọtụtụ narị puku ma ọ bụ nde ndị debanyere aha?
Nke ahụ bụ ebe akpaaka na-abata Jeeng site na PowerInbox n'elu ikpo okwu na-enye ihe dị mfe, akpaghị aka ngwọta iji zipu ahaziri push na email alerts na ndị debanyere aha na efu aka-on mgbalị. Ewubere kpọmkwem maka ndị mbipụta akwụkwọ, teknụzụ mmụta igwe igwe Jeeng na-amụta mmasị ndị ọrụ yana omume ịntanetị iji jee ozi dị oke mkpa, ahaziri ahazi ma zubere maka ịkwanye njikọ onye ọrụ.
Na mgbakwunye na ịnye ngwọta akpaghị aka n'ụzọ zuru ezu, gụnyere ike ịhazi ọkwa iji bulie njikọ aka, Jeeng na-enye ndị nkwusa ohere ka ha tinye ego na ntinye aka na email ha iji gbakwunye mgbakwunye ego ọzọ. Na, site na ụdị ntinye ego nke Jeeng, ndị na-ebipụta akwụkwọ nwere ike ịgbakwunye usoro njikọta akpaaka a siri ike na ụgwọ efu n'ihu.
Site n’inwe usoro nkesa mgbasa ozi nkeonwe na-enyefe ọwa nke na-enye ndị nkwusa ohere inwe mmekọrịta ndị na-ege ntị, ndị na-ebipụta akwụkwọ nwere ike ịmegharịkwu okporo ụzọ-na okporo ụzọ dị elu-na peeji nke ha, yabụ na-ebuli elu ego. Mụta ihe ndị na-ege gị ntị nwere mmasị dị oke mkpa na usoro a ma ị nweghị ike ịme nke ahụ mgbe ị na-adabere na ndị ọzọ, ọwa ozi. Controlchịkwa mmekọrịta ahụ na ọwa ndị nwere bụ ụzọ kachasị mma iji wuo atụmatụ dijitalụ nke na-eme ka ndị na-ege gị ntị na ego ha.
Iji mụta ka Jeeng si arụ ọrụ nke ọma site na PowerInbox nwere ike inye aka:
Debanye aha maka ngosi Taa
Tags: ndị na -egbochi mgbasa ozinkesa ọdịnayakukijeengngwa igweamamọkwa ekwentịịpụ nanwerenwere mgbasa oziigbe ikekpọbata ọkwaNtuziaka ọwa
Nkọwapụta 2020 CRM: Ojiji, Uru & Ihe ofma Aka nke Mmekọrịta Mmekọrịta Ndị Ahịa
Muta ka iwetakwu ego site na ijiri ikike di egwu nke igbe ochicho gi